HANAD OO QABATAY WEJIGA 3AAD AQOON KORORSI MAAMUL WANAAGGA
MUQDISHO: Ururka Haweenka Nabadda iyo Dib u Heshiisiinta HANAD ayaa Hotelka Saxafi 2 ee magalaada Muqdisho ka furay wejigii 3aad ee Aqoon kororsiga la xiriirra sare u qaadista maamulka HANAD, waxaa aqoon kororsigan ka qeybqaadanayay Golaha dhexe iyo Guddiga Fulinta iyo xubno lagu casuumay ka faa`ideysiga aqoon kororsigan , waxaa gacan lama iloobaan ah ka gaystay xagga maalgelinta hay`adaha CRD/INTER PEACE.
Ugu horeyn furitaanka aqoon kororsiga dhinaca Maamulka waxaa hadal kooban ka soo jeedisay Guddoomiyaha Ururka HANADRuqiyo Cali Cabdulle oo sheegtay inay aad ugu faraxsan yahiin in ay qabtaan wejigii saddexaad ee aqoon kororsigan.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan u qabano wejiga saddexaadee aqoon kororsiga ku saabsan sare u qaadista kooxda maamulka HANAD , waxaana rajeynayaa in aqoon kororsigaan u noqdo mid wax weyn u tara gudaha maamulka HANAD iyo Soomaaliyeed , waayo waa inaan wax badan kala faa`ideysano anaga kororsano aqoonteena Maamul ," sidaas waxaa tiri Ruqiyo Cali Cabdulle oo si weyn ugu mahadcelisay Hay'adaha ka gacansiiyay ururka HANAD suragelinta aqoon kororsigan ee CRD/INTER PEACE.
"Waan ku faraxsanahay inaan aragno ku dhaqanka iyo ku shaqeynta maamul wanaagga , waxaan filayaa in isbedel Aqoonta maamulka inuu u kordhay qeybihii qaatay labadii weji ee hore , midda saddexaadna waxaan rajeynayaa inaad si qurux badan ugu faa'ideysataan, waxaan idinku mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad uga qeybqaadateen aqoon kororsigan ." Ayay ku soo afjartay Guddoomiyaha HANAD oo la hadlaysay ka qeybgalayaasha Aqoon kororsigan dhinaca Maamulka.
Aqoon kororsigan ayaa lagu soo qaatay casharo ku saabsan maamul wanaagga iyo hababka ay ku shaqeeyaan ururada heerka caalami, waxaaan la isku dhaafsaday fekrado wax ku ool ah oo dhinaca maamulka.
Si kastaba , Aqoon kororsigan wejiga 3aad ee HANADwaxaa si wanaagsan ugu faa'ideysanaya Guddiga Fulinta HANAD iyo xubno ka baxsan ururka oo lagu casuumay , iyadoo casharada ay bixinayaan C/raxiim Macalin Yabarow, Xuseen Albaani iyo Cabdirisaaq Cabdi Xuseen.